UALITA BATTLE ANGEL 2 UMHLA WOKUKHUTSHWA: YINTONI ESINOKUYILINDELA? - IIMUVI
UAlita Battle Angel 2 Umhla wokuKhutshwa: Yintoni esinokuyilindela?
URosa Salazar, umdlali weqonga odumileyo, wenza inkwenkwezi njengomlingisi ophambili kuAlita ngokusebenzisa ubuchule bokubamba oopopayi. UAlita unjalo
URosa Salazar, umdlali weqonga odumileyo, wenza inkwenkwezi njengomlingisi ophambili kuAlita ngokusebenzisa ubuchule bokubamba oopopayi. UAlita yicyborg enobuchopho bomntu kunye nomzimba oomatshini. Ifilimu iqala nge-25263, kwiminyaka engamakhulu amathathu kamva ukusuka kwintshabalalo yoMhlaba yimfazwe eyintlekele egama lingu-'Ukuwa. 'Xa ugqirha uDyson efumana i-cyborg yakhe, umenzela umzimba aze amthiye igama lokuba ngu-Alita emva kwentombi yakhe awayephulukene nayo kwi-Fall.
Ngoku u-Alita, ngaphandle kwento ayaziyo ngobomi bakhe bangaphambili kunye neenkumbulo zakhe, ukhangela ukuba ngubani na kwaye uthandana noHugo. Kuhambo lwakhe lobu bomi butsha, u-Alita uba ngumqhubi webhola ekhatywayo kwaye uza kudibana nemigulukudu eyingozi eqhuba ishishini elibi elibeka emngciphekweni ukhuseleko lwabathandekayo. NgoJanuwari 31, 2019, inkulumbuso yeAlita Battle Angel yabanjelwa eLeicester Square Theatre eLondon. UAlita Battle Angel waba yeyona bhanyabhanya iphezulu kaRodriguez ngenzuzo yehlabathi jikelele yezigidi ezingama-404 zeedola.
Emva kokufumana le mpumelelo inkulu, ababukeli babelindele ukumbona uAlita kwakhona kwizikrini zabo, kodwa babedimazekile ngamarhe okurhoxiswa kwefilimu elandelayo. UDisney, emva kokufumana uFox, waba sisigqibo sesigqibo sika-Alita, esaphula iintliziyo zabalandeli bakhe xa uDisney wakhanyela ukuvuselelwa kwefilimu ngenxalenye yesibini. Umkhosi ka-Alita wabalandeli ugcwalisa izikhalazo kwihlabathi liphela ukukhulula ukulandelelana kweAlita Battle Angel, kodwa kunjalo, iDisney ngoku iyakuthintela ukukhula kwefilimu.
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho zinkcazo zaseburhulumenteni zenziwe yiDisney ngalo mbandela. Okwangoku, ngokweengxelo, iDisney ithathela ingqalelo ukurhoxiswa kwefilimu ngenxa yexabiso eliphezulu lemveliso yeprojekthi kunye nokuphazamiseka okubangelwe bubhubhane we-covid jikelele. UAlita Battle Angel wenze inzuzo enkulu kwibhokisi yeofisi ngokuchasene nokuqikelela kokungaphumeleli kwayo, kwaye ngoku iDisney ayizimiselanga kuphinda ithathe umngcipheko.
Nangona uRobert Rodriguez, umlawuli, eqinisekisile ukukhutshwa kwefilimu exhaswa nguJames Cameron, umvelisi olawulayo, othe waphakamisa amarhe okubhengezwa komhla wokukhutshwa kwawo ngasekupheleni kuka-2021. Ukujonga imeko yengxabano yeengxelo ezenziweyo malunga nokukhululwa ka-Alita Battle Angel inxenye yesibini, kunzima ukwenza uqikelelo ngoku, kodwa kuya kuba ngumdla ukufumanisa ukuba umkhosi ka-Alita uza kuba nakho ukusindisa u-Alita.
Ngaba u-Alita uya kuqhubeka nokulwa idabi lakhe?
Abathandi balinde ixesha elide bebambelele kwithemba lokujonga uAlita kwakhona kwibala lomlo. UAlita Battle Angel ngumdlalo bhanyabhanya waseMelika owenza i-cyberpunk movie ephuculweyo, ephefumlelweyo ukusuka kuthotho lwe-1990 lwe-Battle Angel Alita eyenziwe ngumculi wase-manga waseJapan u-Yukito Kishiro kunye no-1993 we-animation adaptation ye-Battle Angle. UCameron noLaeta Kalogridis benze le filimu phantsi kwemveliso kaJames Cameron, ngelixa uRobert Rodriguez eyalela le projekthi bhanyabhanya.
Icebo elilindelweyo kunye neCast
UAlita: Idabi leNgelosi laphela nge-twist ebuhlungu kunye nothotho lwemibuzo engapheliyo yababukeli. Ukufa komthandi ka-Alita uHugo kweza kubothusa abalandeli, kubenza bangonwabi ngakumbi ukuze babone indlela uAlita aza kubamba ngayo kule lahleko. Ngaba uAlita uza kuphindezela uHugo? Ngaba ugcinile uHugo? Ukunyuka kuka-Alita njengembaleki eyaziwayo neyimpumelelo yomqhubi webhola yeemoto yenye yeendawo zabalandeli bebali abalinde ukubona.
Uyakuphila njani uAlita eZalem, isixeko semfihlakalo kunye nobubi. UAlita Battle Angel inxenye yesibini uya kusombulula imibuzo edlulileyo kunye nemiceli mngeni emitsha kuAlita okwangoku. Ngaba uAlita ufumanisa ngobomi bakhe bangaphambili? Icebo lika-Alita Battle Angel ezimbini ziya kujikeleza kwezi zinto zeemfihlakalo. Le yimibuzo kuphela engaphendulwa nguAlita, kodwa inkxalabo yile, ngaba abalandeli baya kuba nakho ukumbuza?
Abalandeli balinde iminwe yabo iwele kwaye baphefumla bayibambile ukuze beve isibhengezo esisilindelwe kakhulu seAlita Battle Angel inxenye yesibini.
ukubetha igazi isiNgesi elibizwa
umhla omtsha wokukhutshwa kwefilimu entsha ye-2020
Imiboniso emihle yothando
Ixesha elimnyama 4 ixesha lokukhululwa kwe-Netflix
amarhamncwa amnandi aphuma nini